my kitchen my life: အခြေခံ sauce များ ၄
အခြေခံ sauce များ ၄
နှစ်ခုစလုံးဟာ Egg yolk ကြက်ဥအနှစ်ကနေ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ emulsion of egg yolk, butter, lemon, vinegar, seasoned with salt and cayenne pepper.
Hollandaise requires some skill and knowledge to prepare; care must also be taken to store it properly after preparation. Properly made, the sauce should be smooth and creamy. The flavor should be rich and buttery, withamild tang added by the lemon juice and seasonings. It must be made and served warm, not hot. If the ingredients are emulsified improperly by over- or under-heating them they will separate, resulting in the sauce "breaking" from the emulsion and the yolks coagulating from excessive heat. ( from wiki ) usually inadouble boiler to prevent overheating, and served warm. It is generally used to embellish vegetables, fish and egg dishes, such as the classic Eggs Benedict. သူ့ကို သိမ်းထားမယ်ဆို ရင် မကောင်းပါဘူး။ ခုလုပ် ခုကျွေး မှ ကောင်းပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ egg yolk N butter သူတို့နှစ်ခုကို ရော သမ ကောင် ရိုက်ထားတာ ကြာရင် ကွဲမှာပေါ့ဗျာ။ ၁ ရက် အပြင် ပိုထားမကောင်းဘူး လို့ ဆရာခိုက ပြောဘူးပါတယ်။း)
သူ့ကို sauce လို့ပြောရမှာထက် dressing လို့ပြောတာပိုမှန်မယ်ဗျာ။ cold kitchen က salad တွေ မှာ အများဆုံး သုံးပါတယ်။ ဥပမာ ceasar, tartar, thousand island dressing တွေဟာ mayonnaise ကိုအခြေခံထားတာပါ။ ကြက်ဥ အနှစ်ကို အခြေခံထားတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် mother sauces မှာ hollandise N mayonnaise ကို တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်အောင် ပေါင်းထားတာပါ။ hollandise ကို အပူပေးရိုက်တာနဲ့ mayonnaise ကို အအေးရိုက်တာ လို့ခြားခြားနားနားပြောလို့ရပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ Ingreadients တွေကတော့ egg yolks, vegetable oil, lemon juice, vinegar N seasonings. Franch နဲ့ တချို့နေရာတွေ မှာတော့ mustard ထည့်ကြပါတယ်။
Posted by leo mark at 8:06 PM
ချမ်းလင်းနေ November 30, 2009 at 2:16 PM
ူleoရေ အစားအသောက်အကြောင်းလေးတွေ ရေးထားတော့ ဗဟုသုတအများကြီး ရပါတယ်။အထူးသဖြင့် အီတလီစာတွေ၊ ဆောစ့်အကြောင်းတွေ ရေးတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးနေပါမယ်။ လာလည်သွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ ဒဒွေးမြေက ဘလောခ်ဂါ ၁၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ leoကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အသင်းတော့မဟုတ်ဘူး။စာရေးဖော်ခင်မင်ဘက်တွေပေါ့ဗျာ။ရင်ဘတ်တူသူတွေဆိုရမပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ လီယိုကို သူတို့တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်မေးလ်က naylin.chan@gmail.com ပါ။ လီယို ဆန္ဒရှိရင် မေးလ်အပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဖုံးနံပါတ်က ၀၅၀ ၂၈၇၉၃၃၆ ပါ။ကျွန်တော် လီယိုကို အမြဲအားပေးနေမယ် ဘော်ဒါတစ်ဦးလို့ လက်ခံယူပေးပါ ခင်ဗျာ။
ချမ်းလင်းနေ November 30, 2009 at 2:17 PM